eNasha.com - उत्तमले ल्याए सिनेमा क्रान्ति !
उत्तमले ल्याए सिनेमा क्रान्ति !
मधेशका एक युवाले नेपाली चलचित्र उद्योगको स्वरुप परिवर्तन गर्ने दाबी गरेका छन् । २० वर्षीय उत्तम न्यौपानेले गरेको तीन महिने खोजपछि एउटा साधारण भिडियो दृश्यलाई सिनेमास्कोपको पर्दामा देखाउन मिल्ने दाबी गरेका हुन् । उनले यो कुरालाई मंगलबार जयनेपाल सिनेमामा 'अल्पविराम'को परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि बाहिर ल्याएका हुन् । उनको यो दाबीलाई अल्पविरामका निर्देशक नारायण पुरीले समेत पुष्टि गरेका छन् ।
उनले सिनेमाको सम्पादन गर्ने विभिन्न विदेशी सफ्टवेयरहरु प्याराभिजन तेस्रो, सेल्युल्वाइड, एडब एक्सप्रेस, डीभिक्स तेस्रो, सिनेम्याटि्रक्स आदिको सम्मिश्रण गरी तयार पारेका प्लग-इनहरुको सहायताले ४:३ अनुपातमा रहेका भिडियोहरुलाई १६:९ को फराकिलो पर्दामा एभीआई फरम्याटबाट अल्पविराम चलचित्रको सफल परीक्षण प्रदर्शन गरेका हुन् । यसले १६ मिमिमा खिचिएका चलचित्रलाई फराकिला पर्दा (सिनेमास्कोप)मा प्रदर्शन गर्न मिल्ने न्यौपानेले दाबी गरेका छन् ।
अल्पविरामलाई डल्बी सराउण्ड सिस्टममा ढाल्ने प्रक्रियामा सहभागी हुँदै गर्दा उनले भिडियोलाई पनि सिनेमास्कोपमा देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनी परीक्षण गर्दा यो सफलता हात पारेको न्यौपानेले बताएका छन् । अल्पविरामलाई उनले नै ५.१ सराउण्ड साउण्डमा पनि सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेका छन् । यो परीक्षणमा दृष्य (भिडियो) र ध्वनि (अडियो) दुवैको स्तरीयतामा कत्ति पनि फरक नआएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
१० कक्षा पढ्दापढ्दै एक पटक डीभीडीमा हिन्दी सिनेमामा पाउजूको 'सराउण्ड साउण्ड' सुनेपछि नेपाली चलचित्रमा यस्तै किसिमको स्थानीय प्रयोग गर्ने रुचि उनमा बढेको थियो । त्यही भएर उनले नेपालका प्रख्यात साउण्ड इन्जिनियर प्रदीप उपाध्यायसँग एक महिने ध्वनि शिक्षा तथा इन्टरनेटमा दुइ वर्षे ध्वनि इञ्जिनीयरिङको कक्षा लिएका थिए । यसलगत्तै राजधानीका बीएमआई र सप्तक रेकर्डिङ स्टुडियोमा काम गर्न शुरु गरेका न्यौपाने बच्चादेखि नै विद्युतीय सामग्रीको संरचना अध्ययन गर्न रुचाउने व्यक्ति थिए । उनले यस्ता सामग्रीको निर्माण प्रक्रिया र काम गर्ने तरिका अध्ययन गर्दा बच्चा बेलामा नै ७० वटा क्याल्कुलेटरहरु फुटालेका थिए भने थोत्रा र बिग्रेका रेडियो/टीभीहरु कौडीका भाउमा किन्दै तिनलाई बनाउँदै बिगार्ने गर्थे ।
सिनेमामाथि उनको यो उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण ठान्दै चलचित्र विकास बोर्डले उनलाई थप अध्ययनका लागि १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने बताइएको छ । तर बोर्डले अहिले तत्काल निर्णय गरिनसकेको तर उनको प्रतिभामाथि प्रशस्त सम्भावना र विश्वास रहेको बोर्ड सम्बद्ध व्यक्तिले बताएका छन् ।
साधारण भिडियोलाई पनि सिनेमास्कोपमा ढाल्न सकिने उनको विश्वासलाई पहिले त केही व्यक्तिले गँजडीको गफ ठानेका थिए । केही व्यक्तिले त उनलाई असहयोग गरेको पनि बताए । तर उनको यो सफलतालाई भारतबाट प्रसारण हुने जूम टेलिभिजनले प्रसारण गरेको उनका निकटवर्ती व्यक्तिहरुले उनलाई जानकारी दिएको उत्तमले बताए । "मैले त हेर्न पाइनँ, तर साथीहरुले मलाई बधाइ चाहिँ दिएका थिए", उत्तमले बताए । उनको यो प्रतिभाबाट प्रभावित भएर हलिउडअनलाइनटीभी र डेभिड डेनी अडियो कन्सल्टेन्सीजस्ता संस्थाले अमेरिका निम्त्याएको समेत उनले इनशाडटकमसँगको भेटमा बताए ।
अहिले यो सफलतापछि उनी एउटा यस्तो हार्डवेयर बनाउन लागिपरेका छन्, जसले सिनेमा हलमा डीटीएस वा डल्बी सराउण्ड साउण्डलाई 'डिकोड' गरी प्रदर्शन गर्न सकोस् । उनले सिनेमाको रिलमा नेपालबाट नै ५.१ सराउण्ड साउण्ड 'इन-कोड' गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । उनको यो काममा चलचित्र निर्देशक नारायण पुरीले सघाएकोमा उनी निकै अनुगृहित छन् ।
देवी न्यौपाने र खड्गबहादुर न्यौपानेका एक मात्र सुपुत्रका रुपमा चन्द्रनिगाहपुरमा जन्मिएका उत्तमले स्थानीय जनप्रिय मा.वि. हरिनगर मैराबाट एसएलसी तथा पिपल्स क्याम्पस काठमाडौँबाट आईकमसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
अबका केही महिनामा नेपालमै पहिलो अडियो/भिडियो सफ्टवेयर निर्माण गरेर नेपाली मनोरञ्जन उद्योगमा स्तरीयता वृद्धिमा सहयोग गर्ने उनको रहर छ । उनको यो रहर पूरा होस् !
उनले तयार पारेको 'आमा' हार्डवेयर, जसबाट सिनेमा भवनमा सिनेमास्कोप चलचित्र प्रदर्शन गर्न सहज पुर्‍याउने छ ।
प्रविधि अभिनेता हल्ला रिलिज सेक्स सेलेब्रिटी समारोह सुटिङ पेज थ्री अभिनेत्री